China Polyurethane nrapado mama factory na suppliers | .BỌCH.
1. Ihe: Copolymerized si polyurethane na isocyanate.
2. Ọdịdị: aja aja viscous mmiri mmiri.
3. Okwesiri maka ntuziaka ntuziaka, ike siri ike, arụmọrụ dị elu, nrụpụta dị mma, ịfụfụ ụfụfụ mgbe emechara ya, na-agbaze agbaze na anaghị agbaze, mgbatị dị elu ma dị ala na ihe ndị ọzọ.
4. Ngwa: a na-ejikarị eme ihe nke ụzọ ọkụ, ọnụ ụzọ nche, ọnụ ụzọ ụlọ, ihe ndị dị jụụ na ụdị mpempe akwụkwọ niile na ụdị mgbochi ọkụ, ihe mkpuchi ọkụ (ajị ajị anụ, ajị ajị anụ, ajị ajị ajị ajị agba, ụfụfụ polystyrene plastic, wdg) bonding, nwekwara ike-eji maka metal na metal bonding.
Nkọwa: 0.125L 、 0.5L 、 1.3KG 、 5KG 、 10KG 、 25KG
Mpụga agba: aja aja
Ihe siri ike: 65%
(1) mbido: a na-ehicha elu nke nrapado.
(2) sizing: jiri sawtooth scraper iji tinye gluu n'elu nrapado nke ọma, nwekwara ike iji mkpuchi mkpuchi na-arụ ọrụ, enweghị ike iji ahịhịa ahịhịa (viscosity gluu buru ibu), na-ehicha ihe dịka 250g / m2, kpọmkwem dị ka ọnọdụ ahụ n'ezie na-achịkwa oke nke gluu.
(3) mejupụtara: mgbe mama ahụ nwere ike ịbụ nrapado mejupụtara.
(4) post-ọgwụgwọ: n'ihi na nke a mama bụ a-asụ foamfụfụ nrapado, mgbe nrapado oyi akwa na-gwọrọ, na mama nwere ike gbapuru n'ime Micro oghere nke nrapado, kpọọ ọrụ nke arịlịka, dịkwuo bonding ike, na a ga-abịakọrọ mgbe ọ gwọchara ya.
Aha aha polyurethane na-asụ ụfụfụ
Dị PU - 90
Ọdịdị agba dị aja aja
Oge ọgwụgwọ 60 nkeji
aha ngwaahịa Polyurethane nrapado Aha akara desay
pịnye PU Viscosity（MPA.S) 6000-8000
Nkọwa 0.125L、0.5L、1.3KG、5KG、10KG、25KG Oge ọgwụgwọ 0,5-1h
Agba dị na mpụga aja aja Adị ndụ Ọnwa iri na abụọ
Ihe siri ike 65%
O nwere njirimara nke arụmọrụ kachasị elu, ihe owuwu dị mma, na-asụ ụfụfụ mgbe a gwọchara ya, insolubility na insolubility, nguzogide dị elu na ala.
A na-eji arụpụta ọnụ ụzọ na-eguzogide ọkụ, ọnụ ụzọ mgbochi, ibo ụzọ ụlọ, akụrụngwa oyi, yana ihe mkpuchi ọkụ na ihe mkpuchi ọkụ dị iche iche (ajị anụ ajị anụ, ajị anụ seramiiki, ajị ajị dị mma, polystyrene foam foam, wdg). maka ijikọ. Maka ọla ka metal.
1. ofkpụrụ nke ọgwụgwọ: Nrapado a bụ otu ihe mejupụtara na-enweghị ihe mgbaze, nke a gwọrọ site na mmiri na-etinye na ikuku na n'elu nke adherend.
2.Surface ọgwụgwọ nke adherend: wepu mmanụ na ájá dị n’elu adherend ahụ. Enwere ike iji acetone ma ọ bụ xylene kpochaa mmanụ mmanụ dị ukwuu. Ọ bụrụ na enweghị ntụpọ mmanụ, ọ dịghị mkpa ihicha. Oge, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, fesa obere mmiri mmiri alụlụ n’elu roba ya na ihe ịgba.
3.Glue mkpuchi: Jiri zigzag scraper ka obula tinye gluu n’elu uzo. Enwere ike itinye ya na igwe na-arụ ọrụ, mana a chọghị nchacha (viscosity griiz buru ibu), ọnụego mkpuchi ahụ dịkwa ihe dị ka 150-250g / ㎡. Enwere ike ibelata elu nke adherend ahụ, ma nwee ike ime ka ihu igwe dịkwuo elu, ya bụ, ọ bụrụhaala na ihu nke abụọ ndị a zutere ma nwee ike ịkpọtụrụ mama ahụ n'ụzọ zuru oke, obere mkpuchi ahụ, nke ka mma, n'ihi na a na-etinyekwu gluu, ka mmiri ahụ na-adịkarị n'elu nke adherend dị oke, nke ga-emetụta oge ịgwọ ọrịa. Ọ bụrụ na achọrọ ego nke gluu etinyere, a ga-agbapụ obere mmiri alụlụ kwesịrị ekwesị.
4.compound: enwere ike glued
5.Post-treatment: N'ihi ụfụfụ ụfụfụ nke roba a, mgbe a gwọrọ oyi akwa ahụ, gluu nwere ike ịkụda micropores nke adherend, nke na-arụ ọrụ njigide ma mee ka njikọta ahụ dịkwuo ike. A na-emechi ihe ahụ ma nwee ike ịtọghe ya mgbe ọ gwọchara ya (nrụgide ahụ dị ihe dịka 0.5kg-1kg / cm2).
6.Tool nhicha nwere ike iji ethyl acetate ihe mgbaze.
1, Jiri spatula a gwakọtara agwakọta mee ihe maka onye na-akpụcha ihe, dị ka nnukwu mbadamba. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a na-etinye gluu ike nke ukwuu, ọ gaghị enwe gluu fọdụrụ na mkpuchi mkpuchi. Ọ bụrụ na etinyere mama ahụ oke oke, mgwakota ahụ ga-abụ oke mbibi. Zigzag scraper siri ezigbo ike dika o siri sie ike, na gluu nke sawtooth hapuru ka nke a.
2, The abụọ bonding na-ebupụta na-garuru ga-glued n'otu akụkụ.
Ekwesịrị ịchekwa ngwaahịa a n'ebe dị jụụ na ebe gbara ọchịchịrị n'oge nchekwa. N'ozuzu n'ime ụlọ nkwakọba ihe n'ime ụlọ, oge nchekwa bụ otu afọ. Mgbe ojiji nke gluu ọ bụla, a ga-emechi gbọmgbọm ahụ na ngafe oke, na akwa oyi akwa nke mmiri mmiri ga-eme ka ọ sie ike ma jikọọ ọnụ n'ihi nsị mmiri. Ọ bụrụ na ejighị ya ogologo oge, a ga-ejikọ ya na nitrogen.
Nke gara aga: Manual akara mama
Osote: Abụọ-mbadamba osisi mama
akpụkpọ anụ mama
mmiri mmiri polyurethane
polyurethane mmiri mmiri
Universal mama / Super SBS All-nzube General Ad ...